सहयोगबाट बन्दैछ बेपत्ता पत्रकारको घर
महेश न्यौपाने बिहीबार, वैशाख १८, २०७७, १५:१६
रोल्पा- अपरहणमा पर्नुभन्दा १६ दिनअघि मात्र कान्छो छोरो जन्मिएको थियो। १५ दिन सुत्केरी श्रीमतीको स्याहार गरेर कार्यक्षेत्र जाँदै गर्दा २०५८ साल असार १० गते अपहरणमा परे उनी। जन्मेको १६ दिनमा छोडेर निस्किएको कान्छो छोरा रामचन्द्र अहिले १८ वर्ष पूरा भइसके पनि धनबहादुर रोका भने ज्युँदो छन् कि मरिसके भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।
रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्र सुर्खेतमा खाम (मगर) भाषाका समाचारवाचक थिए धनबहादुर। रेडियो नेपालले पहिलो पटक संचारमा समावेशी अवधारणा सुरु गरेसँगै नेवारी, भोजपुरी, मगर खाम, हिन्दीजस्ता भाषामा समाचार प्रसारण हुन थालेको थियो। मगर खाम भाषामा समाचारवाचकका लागि धनबहादुर रोका र प्रसाद बुढा २ जनाले रोल्पाबाट रेडियो नेपाल छिर्ने अवसर पाएका थिए।
तत्कालीन समयमा सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले उनको परिवारलाई तारो बनाएको थियो। पत्रकार भएसँगै धनबहादुरलाई केही सुरक्षित भएको अनुभुति भएपनि ढुक्क हुने अवस्था थिएन।
धनबहादुरको सुर्खेत रोल्पा आउजाउ चलिरहन्थ्यो। घरबिदामा रोल्पा आएका धनबहादुर कार्यक्षेत्र जाँदै गर्दा प्यूठानको जलुकेबाट अपहरणमा परे।
साविकको रोल्पास्थित मिरुल गाविसमा बस्दै आएको धनबहादुरको परिवारलाई विद्रोही माओवादीले गाउँ बस्न नदिएपछि मिरुल टुटुमा रहेको प्रहरी चौकी नजिक बस्दै आएको थियो। माओवादीले प्रहरी चौकी आक्रमणको श्रृंखला बढाउन थालेछि टुटुमा रहेको प्रहरी चौकी विस्थापित भएसँगै रोका परिवार पनि गाउँ छाड्न बाध्य भएको थियो। जागिरको शिलसिलामा धनबहादुर सुर्खेत लागेसँगै उनको परिवार भने विस्थापित भएको थियो।
सुरक्षाका लागि जन्मथलो मिरुल छाडेर धनबहादुरका आमा, श्रीमती र छोराछोरी जिल्ला सदरमुकाम लिबाङ आएर बस्न थालेका थिए। धनबहादुरका बुबा मनबहादुरलाई माओवादीहरूले २०५३ सालमै गोली हानी हत्या गरिसकेका थिए। बुबा मनबहादुरको हत्या गर्दा धनबहादुरका भाईलाई पनि खुकुरीले छियाछिया गरेर काटेका थिए। धनबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारीका अनुसार बेहोस भएका देवरलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको थियो। समयमै उपचार पाएका कारण उनी बचेका थिए। बुबा र भाईलाई आक्रमण गर्दा धनबहादुरकी आमा लुकेर बचेकी थिइन्। माओवादी युद्धको सुरुवातदेखि नै आक्रमणको तारो बनेको धनबहादुरको परिवार युद्धकालभर जन्मथलो फर्कन पाएन।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै घर फर्किएका धनबहादुरको परिवारसँग बस्ने बास र खाने गाँस थिएन। धनबहादुरकी श्रीमती माईतीमा बसिन्। 'बस्ने बासको ठेगान नहुँदा लामो समय माइतीमा बसेँ,' धनबहादुरकी श्रीमती दिलकुमारीले भनिन्, 'दाजुभाइले बनाई दिएको सानो घरमा छोराछोरी हुर्काउनुको विकल्प थिएन। त्यसै गरेँ,' उनले भनिन्।
धनबहादुर जन्मिएको ठाउँमै घर बनाएर बस्ने ईच्छा लागेकाले घर बनाउने निर्णयमा पुगेपनि उनीसँग आवश्यक रकम थिएन। नजिकका छरछिमेक र इष्टमित्रसँग सहयोग जुटाएर घर निर्माण गर्ने सोचमा रहेकी उनले अहिले भने सहयोग पाउन थालेकी छिन्। 'उनको घर निर्माणका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सहयोगको आश्वासन दिएका छन्,' नेपाली कांग्रेस मिरुलका सभापति खरिलाल डाँगीले भने।
नेपाली कांग्रेस रोल्पा, नेपाल तरुण दल रोल्पालगायतले सहयोगको थालनी गरेको नेपाली कांग्रेस रोल्पाका क्षेत्रीय सभापति गोपाल घर्तीले जानकारी दिए। 'पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा नेपाल तरुण दल रोल्पाले संकलन गरेको सहयोगबाट घर छाउने टिन हस्तान्तरण गरेका छौँ,' घर्तीले भने।
स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको अभिलेखमा २०५९ माघ १६ गते विद्रोहीबाट हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सोही अभिलेखमा धनबहादुरका बुबा मनबहादुरको २०५३ कार्तिक ३० गते विद्रोही माओवादीबाट हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ। 'स्थानीय शान्ति समितिको अभिलेखमा हत्या गरिएको भनिए पनि आफूहरुले अहिले सम्म न लास पाएको अवस्था छ, न सास नै,' धनबहादुरको श्रीमती दिलकुमारीले भनिन्।
एसिया जर्नलिस्ट एसोसिएसनको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति विष्णु निष्ठुरीको पहलमा बेपत्ता पत्रकार धनबहादुरका छोराछोरीलाई २०६६ सालदेखि विद्यालय पढाउन सहयोग गर्दै आएको थियो।
आफ्ना ससुरा किन मारिनु पर्‍यो? अनि श्रीमान किन अहिलेसम्म बेपत्ता पारिनु पर्‍यो? शसस्त्र युद्ध शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरेको डेढ दशक पार गर्दासम्म दिलकुमारीले जवाफ पाउन सकेकी छैनन्। बुबा बेपत्ता हुँदा छोरी पवित्रा साढे तीन वर्षकी थिइन्। जेठो छोरा बसन्त २ वर्ष र कान्छो छोरा रामचन्द्र १६ दिनका मात्र थिए। सानैमा बुबा गुमाएका अबोध बालबालिकाहरु अहिले ठूला भइसके। तर अझै उनीहरुले आफ्ना बुबा र बाजे किन मारिनु पर्‍यो जवाफ पाएका छैनन्।
राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकारिता गर्दागर्दै अपहरणमा परेका धनबहादुरको श्रीमती लामो समयसम्म घरबारविहीन हुँदा पनि राज्यको नजर पुग्न नसकेपछि सहयोग खोजेर घर बनाउन बाध्य भएकी हुन्।